Nke a bụ nhazi Nova Launcher m | Gam akporosis
Ntọala ntọala m Nova
Otu m siri gwa gị ụnyaahụ mgbe m wepụtara isiokwu ahụ tinyere vidiyo banyere Nke a bụ gam akporo m ma ya mere ị jụrụ m, taa, m na-ewetara gị ederede vidiyo zuru oke nke m na-egosi gị ihe niile gbasara m Ntọala ntọala Nova.
N'ihi na onye ọ bụla na-ahụghị video nyochaa na niile ngwa na m arụnyere na m gam akporo, ngwa ndị m na-eji kwa ụbọchị mgbe niile, ihe bụ isi n'ime ha niile, dịka m chere na ọ ga-adị na ngwaọrụ gam akporo gị ọ bụla, bụ Launcher nke arụnyere dị ka ọkọlọtọ na ọdụ m, nyocha nke mgbe ule Launchers maka gam akporo Emechara m mee m mkpebi ịkwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5 Euro nke ụgwọ mbipute Nova Launcher na-efu, Mwepu nke ọtụtụ ndị gam akporo na-ewere dị ka ihe nkwụnye kachasị mma maka gam akporo niile maka ohere niile na nhazi ntọala ọ na-enye anyị.
1 Ntọala niile nke Nova Launcher, m na-egosi gị ntọala nkeonwe m
1.1 Ntọala desktọọpụ
1.2 Ntọala drawer ngwa
1.4 Mpempe akwụkwọ
1.6 Nightkpụrụ abalị
1.7 Mmegharị ahụ na Ntinye
1.8 Agụghị agụ
1.9 Ndabere na mbubata
2 Budata Nova Launcher na Playlọ Ahịa Google
Ntọala niile nke Nova Launcher, m na-egosi gị ntọala nkeonwe m
N'ime ntọala desktọọpụ anyị nwere ike ịchọta ntọala iji gbanwee grid nke desktọọpụ Nova isi, enwere m ya 6 x 5 wee jiri nhọrọ ọnọdụ sub-grid enyocha.
Na nhọrọ iji hazie akara ngosi, size nke desktọọpụ m oyiyi bụ 147% na nhọrọ nke kpọọ enyocha, Fọnda font na size mmanya na ọkara na-acha ọcha na na ndò na a akara ọrụ.
Obosara nke mpụta, akụkụ elu na ala dị na nhọrọ ahụ enweghị, Enwere m ụlọ ọrụ ọchụchọ na-adịgide adịgide na-enweghị atụ, ya bụ, nwere nkwarụ ma na ụdị ọchụchọ ahụ enwere m ogwe Google nke Pixel akara, agba nke ogwe ojii na akara Google G na agba.
Na akụkụ mmetụta mwepụ, enwere m nhọrọ dị mfe ịhọrọ, scrolling desktọọpụ ndabere na ike mode, na-enweghị njedebe na-agagharị, na-egosi ntụgharị nhọrọ ikpeazụ ahọpụtara na agba peeji agba. Enwere m nhọrọ iji tinye ụzọ mkpirisi na-arụ ọrụ na akpaghị aka m nwekwara nhọrọ Wijetị machie enyere aka (ịghara inwe mgbagwoju anya na mkpuchi ihuenyo)
Ntọala drawer ngwa
Enwere m okporo na 5 x 4, akara nke akara ngosi na 150% na akara ngosi enyocha, font size ka kacha nta na Light font na-acha ọcha na-enweghị onyinyo na-enweghị otu akara mode
M nwere nhọrọ nke ugboro ugboro eji ngwa nyeere na Igbe drawer na ọnọdụ eserese, Ngwa na gam akporo Lollipop kaadị nyeere, Mbanye ga-emeghe nyeere, Ihe ngosi mmịfe gbanyere ya na a juputara na akwụkwọ ahụaja ojii na enweghị nghọta na ngwa ngwa mpịakọta mmanya nyeere na agba ya olu olu uhie.
Enwekwara m nhọrọ nchekwa mgbe mbụ, Akpaghị aka na-emechi na-echeta ọnọdụ. Ihe ndị ọzọ m nwere nkwarụ.
Dock style rektangulu udi ọcha na agba na 100% nghọta, naanị 1 n'ọdụ ụgbọ mmiri peeji nke nwere akara ngosi 5 na 150% nha ma enweghị aha. Oke obosara enweghị nke ọ bụla, oke dị ala na ala ala, na ịpịgharị akwụkwọ na-enweghị ngwụcha nwere nkwarụ ka m na-eji otu ọdụ ụgbọ mmiri. Na elu mode niile nwere nkwarụ.
Preview nchekwa na Stack mode, Ndabere ndabere N Preview, na-aga aga nke mgbanwe na gburugburu mode na zuru nwa akwụkwọ ahụaja na akara ngosi na 140% na kpọọ condensed font size na ọkara, ọcha na agba na-enweghị onyinyo na otu akara mode ọrụ.
Isi Okwu Mgbanwe nke bu ihe uku Ihe ngosi akara ngosi enwere ike ibudata ozugbo na Playlọ Ahịa Google. Nhọrọ iji dozie ogo nke akara ngosi enyere, nghazi ihuenyo ndabara, ịpịgharị ọsọ na ọsọ ọsọ na ọnọdụ Nova yana mmemme nke ngwa na ọnọdụ sistemụ.
Gosi ngosi mmanya nyeere na uzo mmanya dokwaraM nwere niile nhọrọ ndị ọzọ nwere nkwarụ.
Abalị mode mgbe niile nyeere Iji nweta ụda ojii nke na-eri obere batrị na ihu AMOLED, naanị nhọrọ m kara akara bụ nke nwere akara drawer.
Mmegharị ahụ na Ntinye
Na nhọrọ a nke mmegharị na ntinye aka akara m Home button imeghe Google Ugbu a na ndabara na ihuenyo na nhọrọ nyeere, OK Google isiokwu nyeere.
Mgbe ahụ na mmegharị ahụ enwere m mmegharị nke ịgbada iji gbasaa ọkwa amara akara ma ọ bụ kenyere, Pịa ugboro abụọ iji gbanyụọ ihuenyo ahụTuo show preview na laa azụ tuo imeghe na-adịbeghị anya ngwa
Obere ọnọdụ na ala aka nri, agba agba ojii, agba agba ojii, ederede ederede na-acha uhie uhie dị iche na akụkụ 8.
Ndabere na mbubata
Na nke a ndabere na weghachite nhọrọ m zọpụta ihe niile m ntọala Nova Launcher na akaụntụ Google Drive m.
Budata Nova Launcher na Playlọ Ahịa Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ntọala ntọala m Nova
Gịnị bụ wijetị wijetị ị na-eji?
Movado weputara smartwatches ohuru ya na gam akporo Wear 2.0 n’oge mgbada